बुटवल टुडे :: शंकरनगरमा १० कोब्रा छाडिए
शंकरनगरमा १० कोब्रा छाडिए
फरक उदाहरण उमेर ५०, कक्षा १२
इरिक्सा व्यवस्थापन गर्न माग
स्थानीय सरकारले गरेका शिक्षक सरुवा अवैध
बिरामीको मृत्युपछि अस्पतालमा तनाव
स्वस्तिक श्रेष्ठ / बुटवल, १३असार ।
सर्पदंश र सर्प संरक्षणको विषयमा कार्यशाला गरिएसंगै सोमबार नवलपरासीमा भेटिएका १० वटा कमन कोब्रा (गोमन) को बच्चालाई शंकरनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुरक्षित छोडिएको छ । शंकरनगर बनबाटिका तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बाबुराम अर्याल, बायोडाईभरसिटी कन्जरभेन्सी नेपालका अध्यक्ष आशिष बश्याल तथा सपं अनुसन्धानकर्ता कमल देवकोटाको रोहवरमा कमन कोबराको नाजानाजा प्रजातीको सर्पका बच्चालाई सुरक्षित वन क्षेत्रमा छाडिएको हो । सर्प दंश र सर्प संरक्षणका लागि संस्थागतरुपमा अघि बढाउने योजना बनाएको भएपनि अहिले पूर्वाधार अभावले गर्दा सर्पलाई वन क्षेत्रमा छोडिएको केन्द्रका अध्यक्ष अर्यालले बताए । बच्चालाई ससाना किरा फट्याग्रा र मुसाका बच्चाहरु आहारका रुपमा आवश्यक पर्ने र सो उपलब्ध नहुने भएकाले जंगल क्षेत्रमा छाड्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए । ‘सर्पको आहार विाहारमा कठिनाई हुने भएकाले जंगल क्षेत्रमा सुरक्षित छाडिएको हो ।’– उनले भने ।
शनिबार नवलपरासीको कावासोती वडा नं.८, स्याउली बजारका नारायण भुषालको खेतनजिक रहेको पुरानो भान्साकोठामा २० वटा अण्डासहित माउ कोबरा भेटिएको थियो । खेत खनिरहेको अवस्थामा कोदालोले माउ सर्पको टाउकोमा चोट लागेको र अण्डाबाट बच्चा निस्किरहेको देखेपछि उनले कालीगण्डकी सामुदायिक अस्पतालमा चिकित्सकलाई जानकारी गराएका थिए । उनले सो मृत माउसहित २० वटा अण्डा डा. छविलाल थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । जसमध्ये मरेका एक माउ र १० वटा बच्चालाई थप अध्ययन, अनुसन्धानका लागि अस्पतालमा सुरक्षित राखिएको छ । जिवित १० वटा बच्चाहरु शंकरनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा छाडिएको हो ।
नेपालमा पाईने थोरै विषालु प्रजातिका सर्पमध्ये कमन कोबरा एक हो । यसले टोकेमा नेपालमा उपचार सम्भव छ । विशेष गरि मुसा, साना जिवहरु खाने यो सर्प ओसिलो क्षेत्रमा बस्ने गर्दछ । गर्मी बढेसंगै सर्पहरु जमिनबाट बाहिर निस्कने हुनाले यसबाट बच्नुपर्ने सर्प अनुसन्धानकर्ता कमल देवकोटाको सुझाव छ । मानिसले नजिस्काएमा आक्रमण नगर्ने भएपनि यसलाई मारिदिदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले यसको संरक्षणको जिम्मेवारी हामीमाथि नै भएको बताए । नेपालमा ८० प्रजातिका सर्पहरु पाईनेमध्ये केवल २१ प्रजातीका मात्र विषालु हुने विज्ञहरु बताउछन । सर्पदंशको उच्च जोखिममा पर्ने नेपालको २६ जिल्लामध्ये रुपन्देही पनि एक हो ।
तामनगर–फर्साटिकर सडक कालोपत्रे कि हिलोपत्रे ?
कपाल काट्ने अपत्यारिलो घटना !